Isizinda Sokuxazululwa Kwe-Ultrasonically Intensified - Hielscher
Isihloko sokusetshenziswa: "Ultrasonically Kuqiniswe Ukuqina Isizinda"
Ultrasonication iqinisa isilawuli esiyingqayizivele se-solvent futhi yenza inqubo iphumelele kakhulu. Isizinda se-Ultrasonic sisebenza ngezinhlobo ezihlukahlukene zamakhemikhali afana namanzi, i-ethanol, i-methanol, i-isopropanol, i-vegetable oils, i-glycerin okuthiwa ambalwa nje. I-cavitation eyakhiwe nge-Ultrasonically ithuthukisa ukudluliswa kwamandla futhi iphazamise amaseli ukuze izinto ezifakwe ngaphakathi kwe-intracellular kanye nezinto ezihlosiwe ze-bioactive zikhishwe ku-solvent. Njengendlela engeyona ye-thermal, i-sonication ivimbela ukuchithwa okushisayo kwamazitha we-thermo-labil. Ngaleyo ndlela, isizinda se-ultrasonic sandisa isivuno, sithuthukisa ikhwalithi yokukhipha futhi sishesha-inqubo.
Funda kabanzi mayelana nezinhlelo eziningi zokufakelwa kwe-ultrasonic kufaka phakathi izifundo ze-case kanye nezivumelwano ze-ultrasonic izizinda!